Bogga ugu weyn 15 buug oo ugu fiican suuqgeynta dhijitaalka ah 2022 -ka waa inuu u akhriyaa suuqgeeyayaasha dhijitaalka ah
isha sawirka: www.istock.com
Miyaad rabtaa inaad xirfadahaaga suuqgeynta dhijitaalka ah gaarsiiso heerka xiga? Adduunyada maanta aadka u dhijitaalka ah waxaa lagama maarmaan u ah xirfadle kasta oo suuqgeynta dhijitaalka ah (iyo damaca suuqgeynta dhijitaalka ah) inuu yeesho aqoonta ugu habboon ee ku saabsan warshadaha iyo isbeddellada hadda jira.
Hal dariiqo oo wanaagsan oo lagu heli karo aqoontan waa iyada oo la maalgashado lana akhriyo buugaagta ugu fiican suuqgeynta dhijitaalka ah ee la heli karo.
Buugaagtani waxay ku siin doonaan aasaas adag marka aad dhex mushaaxayso dunida suuqgeynta dhijitaalka ah. Liiska Buugaagta ugu fiican ee Suuqgeynta Dijital ah ayaa had iyo jeer is -beddeli doona marka isbeddellada cusubi soo baxaan, laakiin liiskani wuxuu noqon doonaa bar -bilow wanaagsan.
Marka, akhri si aad u ogaato 15ka Buug ee ugu Fiican Suuqgeynta Dijital ah oo aad hadda akhrin karto si kor loogu qaado xirfadahaaga suuqgeynta dhijitaalka ah.
Suuqgeeyayaasha Dijital ah ma yihiin kuwo hodan ah?
Suuqgeynta dhijitaalka ah ayaa dhawaan uun bilawday inay noqoto warshad shaqo oo caan ah. Si kastaba ha ahaatee, suuqa iyo dhaqaalaha tiknoolajiyadda casriga ah ee mar walba is-beddelaya ayaa ka dhigay goobta suuqgeynta dhijitaalka ah mid aad u macaash badan sidii hore.
Iyada oo suuqa dhijitaalka ah uu sii kordhayo maalin kasta iyo baahida sii kordhaysa ee dadka leh xirfado ku filan, suuqgeynta dhijitaalka ah waxay arki kartaa oo kaliya koritaan wanaagsan.
Suuqgeynta dhijitaalka ah ayaa kobcin karta maalkaaga haddii aad la jaanqaaddo dhaqdhaqaaqa iyo firfircoonida suuqa dijitaalka ah. Isbeddellada cusub ayaa had iyo jeer soo ifbaxaya, habab cusub oo lacag -u -helidda waxa ku jira ayaa si joogto ah loo ogaadaa.
Akhri Sidoo kale: 15 Kutub ee ugu Wanaagsan Tobankii | 2022 Liiska
Halkeen ka akhrisan karaa Suuqgeynta Dijital ah?
Jawaabta ugu fudud uguna tooska badan ee su'aashan: Internetku waa maktabaddaada ee ka faa'iidayso si buuxda. Ka sokow liiskayaga 15ka Buug ee ugu Fiican Suuqgeynta Dijital ah, waxaad ka heli doontaa suuqgeyn dijital ah Khayraadka internetka oo dhan.
Qeybta ugu wanaagsan ayaa ah inta badan ilaha waa lacag la'aan, marka maahan inaad sameyso ballanqaad dhaqaale oo aad u weyn si aad u akhrido buugaagta ugu fiican suuqgeynta dhijitaalka ah.
Suuqgeynta ayaa si aad ah u kobcisay dhowrkii sano ee la soo dhaafay. Hadda way ka yar tahay xayeysiisyada soo jiidashada leh ee raadiya macaamiisha, laakiin waxay aad uga badan tahay abuuritaanka xiriirro macno leh si loo soo jiito macaamiisha.
Goobaha sida YouTube -ka ayaa sidoo kale aad ugu fiican casharrada haddii aad doorbideyso dhexdhexaadkaas. Runtii waad ku halaagsantay ikhtiyaarka, markaa ha lumin intaad raadineyso ilo ku habboon.
Waa maxay Buugaagta ay Suuqgeeyayaasha Dijital ahi akhriyaan?
Adigoo ah suuq -geeya dhijitaal ah, waa inaad akhridaa mowduucyo aad u kala duwan si aad ciyaarta ugu sii jirto oo aad u cusbooneysiiso. Ma jiro liis u qoran buugaag aad akhrido laakiin akhri inta aad awooddo.
Maxay yihiin Buugaagta ugu Fiican ee Bilaabidda Wakaaladda Suuqgeynta Dijital ah?
Kahor intaadan bilaabin ganacsigaaga laxiriira suuqgeynta dhijitaalka ah, waxaa muhiim ah inaad naftaada barato oo aad fahanto intii suurtogal ah oo ku saabsan suuqgeynta dhijitaalka ah ee hay'adaha.
Si joogto ah naftaada u hagaaji iyada oo loo marayo habka barashada. Akhri buugaag ka hadlaysa habka sameynta iyo maaraynta ganacsiga.
Waxaad kobcin kartaa xirfadahaaga dhijitaalka ah oo xirfaddaada ku dhisi kartaa koorsooyin onlayn ah iyo ilo ka socda hay'adaha sare.
Markaa, ku maal gali inaad qayb fiican ka qaadato wakhtigaaga iyo lacagtaada barashada. Waxaad sidoo kale rabi doontaa inaad si qoto dheer u fahanto warshadaha intii suurtagal ah.
Buugaagtaada suuqgeynta dhijitaalka ah ayaa kaa caawin doonta inaad fahanto fikradaha sida ololaha suuqgeynta emaylka, PPC (suuq-geynta guji-guji), SEO, iyo abuurista marinnada internetka.
Waxaad sidoo kale rabi doontaa inaad leedahay faham aasaasi ah oo ku saabsan naqshadeynta garaafka iyo suuqgeynta waxyaabaha sidoo kale. Marka taasi meesha ka baxdo, waxaad rabi doontaa inaad hesho suuqaaga.
Tani waa muhiim maadaama ay go'aamin doonto sida aad u xirxirto alaabtaada iyo adeegyadaada. Tartanka booska suuqgeynta dhijitaalka ah waa mid aad u xoog badan, sidaa darteed helitaanka booskaaga suuqgeynta dhijitaalka ah ee ugu fiican ayaa muhiim u ah inaad istaagto. Waxaad markaa diiradda saari kartaa dhagaystayaal yaryar oo danaynaya waxaad soo bandhigto.
15 Buugaagta ugu Fiican Suuqgeynta Dijital ah - dib u eegista buugga
Halkan waxaa ah dib -u -eegista buugaagta ugu wanaagsan ee suuqgeynta dhijitaalka ah:
1. Suuqgeynta 4.0: Ka guuritaanka Dhaqanka una guuray Dijital - Phillip Kotler
Liiska buugga ugu horreeya ee agabyada suuqgeynta dhijitaalka ah ee ugu wanaagsan ayaa ah Ka -guuridda Dhaqanka ilaa Dijital.
Kani waa buug-gacmeed aad loogu baahan yahay suuqgeynta jiilka xiga. Waxaa qoray maamulayaasha suuqgeynta ee hormuudka u ah adduunka, buugani wuxuu kaa caawinayaa inaad dhex mushaaxdo adduunka sii kordhaya ee isku xiran iyo beddelidda muuqaalka macmiilka si aad u gaarto macaamiil badan, si waxtar leh.
2. Ololaha Suuqgeynta Dijital ah ee ugu Fiican Adduunka II - Damian Ryan
Daabacaaddan, qoraa Damian Ryan wuxuu soo bandhigayaa qaar ka mid ah ololaha suuqgeynta dhijitaalka ah ee ugu guulaha badan kuwaas oo saameyn ku yeeshay sida aan u aragno sumcadaha, hawlgelinta iyo awoodda internetka marka ay timaaddo suuqgeynta.
Buuggu wuxuu daboolayaa 40 ololeyaal suuq -geyn oo dhijitaal ah oo kala duwan oo ka socda 40 magac/wakaaladood oo ay ku jiraan Activa, Harley Davidson, Nike, Samsung iyo UEFA.
Buuggu waa mid dhiirrigelin leh wuxuuna ku siin doonaa dhowr tilmaamood oo ku saabsan sida aad u abuuri karto oo aad u yeelan karto olole dijitaal oo guuleysta.
Waa mid ka mid ah buugaagta ugu wanaagsan suuqgeynta dhijitaalka ah.
Akhri: 15 Buugaagta Is Caawinta ugu Wanaagsan | 2022 Liiska
3. SEO 2017: Baro Kordhinta Mashiinka Raadinta oo leh Xeeladaha Suuqgeynta Internetka ee Casriga ah - Adam Clarke
Tan waxaa loo tixgeliyaa inay ku jirto buugaagta ugu fiican xeeladaha suuqgeynta dhijitaalka ah. Buuggu waa inuu akhriyaa qof kasta oo doonaya inuu wax ka barto xeeladaha SEO -ga iyo dariiqooyinka darajooyinka ugu sarreeya bogagga natiijooyinka raadinta Google. Buuggu wuxuu daboolayaa dhowr mowduuc oo muhiim ah oo ku saabsan hagaajinta mashiinka raadinta.
Waxay ku dhex mari doontaa aasaaska hagaajinta mashiinka raadinta iyo sida loo kobciyo raadadka dhijitaalka ah ee shirkaddaada.
Waxay sidoo kale ku siin doontaa dhibco ku saabsan sida loo kala sarreeyo natiijooyinka raadinta Google iyo in la kordhiyo taraafikada/hawlgelinta iyo si kor loogu qaado macaamilkaaga SEO.
4. Chemistry -ga Maadada, Daabacaadda 5aad - Andy Crestodina
Daabacaaddan, qoraagu wuxuu si taxaddar leh u eegay nuxurka buugga si loogu daro cilmi -baaristii ugu dambaysay ee suuq -geynta, farsamooyinka iyo isbeddellada soo baxaya, iyo weliba heerarka cusub.
Buuggu waa buundo u dhaxaysa xogtii hore iyo xog cusub.
Way u fiican tahay qof kasta oo ku cusub beerta suuqgeynta, iyo sidoo kale kuwa rajaynaya inay ku dhisaan aqoonta suuqgeynta ee ay hore u haysteen.
5. AI ee Suuqgeeyayaasha, Daabacaadda 2aad - Christopher Penn
Kobaca Sirdoonka Artificial (AI) ee dunida maanta lama iska indho tiri karo oo saamaynta ay ku leedahay nolol maalmeedkeenna malaha waa laga hooseeyaa. Daabacadan dib loo qorey, qoraagu wuxuu sahamiyaa mustaqbalka suuqgeynta maaddaama AI weligeedba beddesho.
Christopher waa khabiir ku xeel dheer mawduucyada suuqgeynta la xiriira AI buuggu wuxuu u fiican yahay qof kasta oo raadinaya inuu barto aasaaska AI iyo sida loogu adeegsado suuqgeynta; laga bilaabo soo jeedinta YouTube -ka illaa xayeysiisyada Facebook, waxaad la yaabi doontaa inta AI saamayn ku leedahay warshadaha suuqgeynta.
6. Ku guulaysiga Daryeelka Macaamilka Bulshada - Dan Gingiss
Baraha bulshada ayaa beddelay sida adeegga macmiilka loo sameeyo buugganina wuxuu sahminayaa isbeddelkaas oo dhererkiisu yahay.
Dan wuxuu ka hadlayaa sida shirkaduhu ugu beddeli karaan riyooyinka PR ee suurtagalka ah daryeel macmiil taas oo iyana loo rogi karo macaash.
Buuggu wuxuu u kala jabay tallaabooyin sahlan oo la fahmi karo oo kaa caawin doona inaad kobciso koox daryeel macmiil oo wax -qabad leh.
Ka -qaybgalka Macaamilka ee Wanaagsan ayaa muhiim u ah adduunka suuq -geynta ee maanta waana buugga kaa caawinaya inaad ku guuleysato daryeelka macaamiisha bulshada.
7. Suuqgeynta Warbaahinta Bulshada 2018: Sida Loogu Kordhiyo Guusha Shirkaddaada Facebook, Twitter, Instagram & Co. - Stephanie Holmes
Buuggeeda, Stephanie Holmes waxay ka soo qaadatay waayo -aragnimadeeda hodanka ah ee warbaahinta bulshada iyo waayo -aragnimada suuq -geynta internetka si ay u gudbiso buug ka caawin doona urur kasta inuu adeegsado warbaahinta bulshada si uu u wanaajiyo isgaarsiinta internetka.
Buuggu wuxuu leeyahay hab sahlan oo loo raaco aragtiyaha muhiimka ah ee ku saabsan abuurista istiraatiijiyad suuqgeyn bulsheed oo caado u ah ganacsi kasta. Waa qoraal lagu taliyay qof kasta oo doonaya inuu galo maamulka warbaahinta bulshada iyo mid ka mid ah buugaagta ugu wanaagsan suuqgeynta dhijitaalka ah.
8. Hug Nacaybkaaga: Sida Loogu Qancinayo Cabashooyinka Oo Loo Ilaaliyo Macaamiishaada - Jay Baer
Kani waa buug kale oo weyn oo kaa caawinaya inaad gaarsiiso khibrad adeeg macmiil oo aan laga adkaan karin.
Warbaahinta bulshada ayaa samayn karta ama jebin karta summadaada/ururkaaga. Sidaa darteed, waxaa muhiim ah in si taxaddar leh loo maareeyo oo loola macaamilo cabasho kasta ama warcelinta macmiilka si aan si xun u saamaynayn ganacsigaaga.
Buugga, qoraagu wuxuu ku baadhay siyaabo kala duwan oo loo maareeyo cabashooyinka iyo sida looga jawaabo. Buuggu wuxuu ka kooban yahay daraasado kiis oo waxtar leh oo ku siin doona macnaha guud ee ku saabsan sida aad u samayn karto waaya -aragnimada adeegga macmiilka ee wanaagsan.
9. Suuqgeynta Guerilla - Jay Conrad Levinson
Buuggan waxaa inta badan loogu talagalay meheradaha yaryar ee soo socda kuwaas oo laga yaabo inaysan haysan bucks bug si ay u bilaabaan olole suuqgeyn aad u weyn. Si kastaba ha ahaatee, tusaalooyinka uu bixiyay qoraagu waxay u shaqeeyaan ururada yaryar iyo kuwa dhisanba.
Buugaagtan suuqgeynta ugu fiican ee internetka waxay ku siinayaan talooyin ku saabsan sida aad u adeegsan karto madal bilaash ah oo si sahlan loo heli karo sida warbaahinta bulshada iyo podcasts si aad u dhisto wacyiga astaanta.
Tani waa inay akhriyaan ganacsatada iyo milkiilayaasha meheradaha yaryar.
10. Dhisidda Calaamadda Sheekada - Donald Miller
Suuqgeynta waxay ku saabsan tahay u sheegidda sheeko ay macaamiishu la xiriiraan kuna qasbaysa inay iibsadaan badeecadaada ama adeeggaaga. Suuqgeynta dhijitaalka ah waxba kama duwana.
Adduunyada uu tartanku aad u sarreeyo oo ay joogto ka yihiin, wax-ka-beddelka baahida loo qabo, suuq-geeyayaashu waxay u baahan yihiin inay si adag u shaqeeyaan si ay si hufan u gooyaan buuqa una gaaraan dhagaystayaashooda bartilmaameedka ah.
Buugga, Miller wuxuu sahamiyaa sida meheradaha iyo suuqyadu si wax ku ool ah ula xiriiri karaan macaamiishooda si loo kordhiyo iibka iyo daacadnimada macmiilka.
11. Buug-gacmeedka Qoraaga-Qoraha: Tusaha Tallaabo-tallaabo ee Qoraalka Nuqulka Iibiya-Robert W. Bly
Sida cinwaanku tilmaamayo, buuggan waxaa loogu talagalay qof kasta oo la shaqeeya, wax qora ama oggolaada nuqulka. Fahamka aasaaska aasaasiga ah ee nuqul -qorista iyo fikradaha ololaha hal -abuurka ayaa ka caawin doona suuq -yaqaan kasta inuu qoro nuqul qasab ah oo aakhirka iibin doona.
Buuggu wuxuu ku siin doonaa xoogaa casharro muhiim ah oo ku saabsan farsamooyinka nuqulka oo kaa caawin doona inaad u qorto nuqul daabacaadda iyo xayeysiisyada onlaynka ah, emayllada, iyo mareegaha.
Waxaa xoogga la saaraa si cad, wax qancin kara, nuqul ka dhigi doona oo heli doona meheraddaada ama summad aad u badan ― iyo iibinta alaabo badan.
12.Tani Waa Suuqgeyn: Laguma Arki Karo Ilaa Aad Baratid Aragga - Seth Godin
Godin wuxuu ku siiyaa aasaaska suuqgeynta hodantinimada xikmadda buug kooban, la heli karo, oo aan waqti lahayn. Kani waa mid ka mid ah buugaagta ugu wanaagsan ee ku saabsan suuqgeynta dhijitaalka ah.
Way u fiican tahay ganacsade kasta ama meherad kasta, iyadoon loo eegin badeecad ama adeeg. Buuggu wuxuu kaa caawin doonaa inaad dib u abuurto sida aad u soo bandhigto badeecadaada ama adeeggaaga adduunka, si aad ula yeelato isgaarsiin macno leh dhagaystayaasha la beegsanayo.
Buuggu wuxuu daboolayaa mowduucyo ay ka mid yihiin meelaynta alaabta, abuurista sheekooyin sumcad leh iyo isgaarsiin wax ku ool ah oo lala yeesho dhagaystayaasha la beegsanayo.
13. Hit Makers: Sayniska Caannimada ee Da'da Digniinta Dijital ah - Derek Thomson
Suuqgeynta iyo suuqgeynta dhijitaalka ah waxay ku saabsan tahay in la maqlo. Dhammaan fikradahaaga ayaa loo xisaabin doonaa waxba la'aan haddii ay ku guuldareystaan ​​inay ku xirmaan dhagaystayaasha iyo suuqa.
Buuggan suuq -geynta dhijitaalka ah, qoraaga Derek Thomson wuxuu sahamiyaa cilmi -nafsiga qarsoon ee dabeecadda macaamilka iyo sida habdhaqankani u qaabeeyo sababta alaabtu u guulaystaan ​​iyo in kale. Waxay sahamisaa saamaynta dhaqanka, tirakoobka dadka iyo sida farsamooyinka casriga ahi ay dib u qeexeen caan -ka.
Tani waa in loo akhriyaa haddii aad rabto inaad barato sida suuq -geynta u kobcday sannadihii la soo dhaafay iyo saamaynta muhiimka ah ee horumarkan.
14. Jabhadda Suuqgeynta - Mark Schaefer
Mark Schaefer waa magac caan ku ah bulshada suuqgeynta buuggiisuna wuxuu caddeyn u yahay aqoonta ballaaran ee uu u leeyahay warshadaha. Wuxuu sahamiyaa baahida sii kordheysa ee mas'uuliyadda bulshada, adeegga macmiilka ee gaarka ah iyo hoos u dhaca daacadnimada macmiilka ee suuqgeynta dhijitaalka ah.
Buuggu wuxuu ka hadlayaa mawduucyadan iyo qaar kaloo badan oo saamaynaya meheradaha marka laga eego dhinaca suuqgeynta wuxuuna bixiyaa xalalka dib u noqoshada macmiilka iyo sida suuqgeynta ay ugu horrayso bixinta adeegga iyo ka -qaybgalka hoggaamineed ee macaamiisha.
Akhri: 15 -ka Buug ee ugu Wanaagsan ee Macallin kasta uu akhriyo | 2022 Liiska
15. Xayeysiinta Sayniska - Claude Hopkins
Tis buugaagta suuqgeynta ugu fiican ee internetka ayaa bixiya maroojin sida aan u sharxi karno isbeddellada suuqgeynta adduunka maanta.
Buugga, Claude Hopkins wuxuu isku dayaa inuu sharraxaad ka bixiyo suuq -geynta labadaba dhinacyo tiro iyo tayoba leh. Qoraagu wuxuu la wadaagaa fikradihiisa ku saabsan sida meheradaha iyo suuqgeeyayaashu u adeegsan karaan sayniska tirooyinka iyo cilmi baarista si ay gacan uga geystaan ​​sharraxaadda sida dhagaystayaasha bartilmaameedka ahi ula dhaqmaan farriimaha kala duwan.
Waxay si qoto dheer ugu qotontaa si gaar ah iyo sida sayniska suuqgeynta uu waxtar u leeyahay inuu u keeno natiijooyinka la rabo ganacsi kasta. Tani waa waajib qof kasta oo jecel inuu ka fekero cilmiga ku lug leh suuqgeynta maanta.
Su'aalaha la isweydiiyo ee ku saabsan Buugaagta ugu Fiican Suuqgeynta Dijital ah
Xagee ka heli karaa 15ka ugu Fiican Buugaag waayo, Suuq Digital?
Dhammaan buugaagta dib loo eegay waxaa laga heli karaa Amazon. Kaliya guji cinwaanka buugga waxaana laguu wareejin doonaa mareegaha.
Sidee buugaagani u caawin doonaan ganacsigayga?
Waxay ku siin doonaan aqoon aad u baahan tahay si ay kuugu dhisaan xirfadaha suuqgeynta dhijitaalka ah. Xirfadahaan waxaad ku farsamayn kartaa xalal dawaarle ah oo loogu talagalay meheraddaada oo aad ku dabaqi kartaa kuwan. Buugaagtu si fudud waa tilmaan.
Miyaan akhriyaa buugaagtan kaliya?
Xaqiiqdii maya! Akhri buugaag kale oo aad ka heli karto meel ka baxsan liiskan. Wax badan ka baro ilo kale.
Waa kuwee ilo kale oo aan akhrin karaa si aan wax badan uga barto suuqgeynta dhijitaalka ah?
Isticmaal aaladaha sida YouTube oo maktabado badan ku leh mawduuca.
Miyaan qaataa koorso lacag leh si aan u barto suuqgeynta dhijitaalka ah?
Iyada oo ku xidhan sida aad wax u baratid, lacagta la bixiyay ayaa hubaal noqon karta faa'iido. Kahor intaadan bixin, si ballaaran wax u akhri oo cilmi baaris ku samee koorsooyinka la heli karo (bilaash iyo lacag). Tani waxay kaa caawin doontaa inaad go'aansato.
Suuqgeynta dhijitaalka ah ayaa halkan u joogta oo suuq -geyste kasta waa inuu mudnaanta siiyaa si loogu daro suuq -geynta dhijitaalka ah xeeladaha suuqgeynta.
Buugaagtee ayaad akhrin doontaa ama ma akhriday?
Hoos kaga tag faallooyinka oo la wadaag qaar ka mid ah ilaha suuqgeynta dhijitaalka ah ee aad isticmaasho si aad u dhisto saldhigga aqoontaada.
15 Kutub ee ugu Wanaagsan Tobankii | 2022 Liiska
Goobaha Tigidhada Riwaayadaha Ugu Fiican 10
Tigidhada riwaayadaha ee madadaaladayada caanka ah ee aan jecelnahay waxay ku kacayaan hanti badan. Tigidhada caadiga ah waa la iibiyaa ka hor mid…
15 Buugaagta Ugu Fiican Qorista | 2022 Waa Inay U Akhriso Qorayaasha
Akhrinta buugaagta waxaa loo micneeyay inay yihiin caddayn buuxda, ujeedo, iyo caddayn aan la isku halleyn karin oo natiijada ugu fiican ah, qof kasta…
Intee In le'eg ayaan ku Bixin karaa Raashinnada si aan u badbaadiyo Lacag badan
Cuntadu waa waayo-aragnimo shakhsi ahaaneed, oo shakhsi ahaaneed taas oo talobixin ku saabsan sida lacag loogu keydiyo ay adag tahay…
Haddii aad raadinayso hab lagu wanaajiyo sawirradaada, ha ahaato adeegsi shaqsiyeed ama caawimaad…
Weligeed ma jirin waqti ka wanaagsan oo lagu kasbado shatiga lagu tababarto duugista ama lagu daro…